Slitter Rewinder စက်ရုံ China Slitter Rewinder ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
AS-370SB မြန်နှုန်းမြင့် Slitting Machine သည်အသစ်စက်စက်တီထွင်ထားသောကြောင့်ကျဉ်းမြောင်းသော web တံဆိပ်များဖြတ်တောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဆုံလည်ပြန်လှည့်ခြင်းယူနစ်ကအချောလိပ်ကိုပြောင်းလဲရန်အချိန်ကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများအတွက် rewinding core၊ မီတာကောင်တာ၊ နံပါတ်ကောင်တာနှင့် material stop machine function တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ S370 S480 S550 Slitting Speed ​​220m / min 220m / min 220m / min Max ။ Web အကျယ် 370mm 480mm 550mm Max ။ လှည်ပေးသောအချင်း 800mm 800mm 800mm M ...
AS-550 အလိုအလျောက်ဖြတ်စက်သည်အလိုအလျောက်သေဆုံးသည့်စက်၏အရန်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ဒီစက်ကကျဉ်းမြောင်းတဲ့စက္ကူအပိုင်းအစတွေကိုဖြတ်ဖို့သင့်တော်တယ်။ ၎င်းတွင်မီတာကောင်တာ၊ နံပါတ်ကောင်တာ၊ unwinding နှင့် rewinding တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည်သံလိုက်ဘရိတ်နှင့် cluth တို့မှထိန်းချုပ်ထားသည်။ တည်ငြိမ်သောစစ်ဆင်ရေး။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ AS-550 Sl ...
AS-1300 1300mm Automatic Slitting Machine
1. ကြိမ်နှုန်း Drive ကို, PLC ထိန်းချုပ်မှု + ထိတွေ့မျက်နှာပြင် 2.Auto Taper တင်းမာမှုထိန်းချုပ်ရေး 3.Hydraulic System ကိုအလိုအလျောက် Uploader Lifter 4. Taper တင်းမာမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်နည်းပညာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ AS-1300 ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်း 5-200m / min မက်စ်။ Web Width 1300mm Min Slitting Width 30mm Max ။ လှည်အချင်း 800mm မက်စ်။ Rewinding Diameter 600mm ၏တိကျမှန်ကန်မှု± 0.2mm Voltage AC380V စုစုပေါင်းပါဝါ 6KW အရွယ်အစား 2600 × 2100 × 1700mm စက်အလေးချိန် 3500KGS ဗီဒီယို
စက္ကူ Straw များအတွက် AS-800 အလိုအလျောက်ဖြတ်စက်
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ AS-800 Slitting Speed ​​10-200m / min မက်စ်။ Web အကျယ် 800mm Min Slitting Width 13.5mm Max ။ လှည်အချင်း 1000mm မက်စ်။ Rewinding Diameter 550mm တိကျခြင်း၏တိကျမှု± 0.2mm Voltage AC380V စုစုပေါင်းပါဝါ 5KW အရွယ်အစား 2500 × 2000 × 1400mm စက်အလေးချိန် 3500KGS ဗီဒီယို
လက်စွဲဆုံလည် Rewinder နှင့်အတူ AS-320T ဖြတ်တောက်စက်
တံဆိပ်များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြီးဆုံးခြင်းစီးရီး (စူပါမားကတ်, ဘဏ်ရုံးသုံး), Pvc, OPP, BOPP, AL Foil.etc; ၁.၀ လက်မမှ ၃ လက်မအထိအလိုအလျောက်အလိုအလျှောက်လည်ပတ်စနစ်ဖြင့်လေကိုတိုးချဲ့ထားသောရိုးတံများကိုပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အမှုန့် clutch tension controller နှင့်ပိုမိုနိမ့်သောဆူညံသံနှင့်တည်ငြိမ်သောမြန်နှုန်း၊ လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုအတွက် pedal switch ဒီဇိုင်းသည်အရေအတွက်နှင့်မီတာကိုပစ်မှတ်အဖြစ်ထိန်းချုပ်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်များ AS-320T Slitting Speed ​​120m / min မက်စ်။ Web အကျယ် 320mm Max ။ လှည်အချင်း 500mm မက်စ်။ လှိမ့်လှန် Diamete ...
AS-1100 1100mm Automatic Slitting Machine
1.Frequency Drive, PLC ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု + ထိတွေ့မျက်နှာပြင် 2.Auto Taper Tension Control 3.Hydraulic System အလိုအလျောက်တင်စက် Lifter 4. အဆက်မပြတ် - တင်းမာမှုစနစ် (နှစ်ချက်တင်းမာမှုအာရုံခံကိရိယာ) နည်းပညာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ AS-1100 Slitting Speed ​​5-200m / min Max ။ Web အကျယ် 1100mm Min Slitting Width 30mm Max ။ လှည်အချင်း 800mm မက်စ်။ Rewinding Diameter 600mm ၏တိကျမှန်ကန်မှု± 0.2mm Voltage AC380V စုစုပေါင်းပါဝါ 6KW အရွယ်အစား 2600 × 2100 × 1700mm စက်အလေးချိန် 350 ...
PE, PS, PS, PVC နှင့်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးတံဆိပ်များ၊ အီလက်ထရောနစ်ကွန်ပျူတာများ၊ optical ပစ္စည်းများ၊ film roll, aluminium foil roll, စက္ကူလိပ်အမျိုးမျိုး, ရုပ်ရှင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများပုံနှိပ်ခြင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အထူးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ AS-1000 Slitting Speed ​​10-400m / min Jumbo Roll Width 1000mm Min ။ စက္ကူ Core3၏ ၅၀ မီလီမီတာအတွင်းအချင်း၏ထုတ်လုပ်မှုအကျယ်သည် ၆၆ မီလီမီတာသို့မဟုတ်အများဆုံးမီလီမီတာဖြစ်ရမည်။ လှည်အချင်း 800mm မက်စ်။ ပြန်လည်ဖွင့်သည် ...
AS-370SL အမြန်နှုန်း Servo Sliiter Rewinder
စစ်ဆေးရေးစနစ်ပရင်တာပန်းကန်ပြား CCD ဝက်ဘ်လမ်းညွှန် AS-370SL မြန်နှုန်းမြင့်ဖြတ်စက်ကိုအသစ်စက်စက်တီထွင်ပြီး၊ ကျဉ်းမြောင်းသောဝဘ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပြည့်အဝ servo မော်တာမောင်းနှင်သည့်စနစ်၊ တင်းကျပ်သောတင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ်၊ နိုင်ငံတကာကျော်ကြားသော webguide စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဆုံလည်အမျိုးအစားနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းစနစ်၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောအတွင်းနံရံများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်လှည့်ခြင်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ S370 S480 S550 ဖြတ်တောက်မှုမြန်နှုန်း ၃၅၀ / မိနစ် ၃၅၀ / မိနစ် ၃၅၀ / မိနစ်မက်စ်။ Web အကျယ် 370mm 480mm ...